Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Galmudug oo dib uga qarxay duleedka magaalada Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Galmudug oo dib uga qarxay duleedka magaalada Gaalkacyo
November 6, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Taangiga ciidamada Puntland oo maraya duleedka magaalada Gaalkacyo. [Sawirka: Archive]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Galmudug ayaa saakay oo Axad ah dib uga bilaabmay duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, sida ay ilo-wareedyada sheegayaan.
Dagaalka manta oo Axad ah ayaa imaanaya asbuuc kadib markii madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ay heshiis xabad joojin ah ku gaareen magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutaga Imaaraatka Carabta.
Faahfaafin dheeri ah dhawaan la soco.
November 8, 2016 Dagaal culus oo u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug oo dib uga qarxay duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo
June 4, 2016 Madaxweynaha Puntland oo ku wajahan ee Imaaraatka Carabta
April 20, 2017 Sanduuqa Horumarinta Abu Dhabi oo deeq dhan $89.8 milyan ugu deeqay Soomaaliya
November 2, 2016 Madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug oo heshiis hordhac ah oo lagu joojinayo dagaalka Gaalkacyo ku gaaray dalka Isutaga Imaaraatka Carabta
Heavy battle between Puntland and Galmudug erupts again outside Galkayo town
At least 25 killed in fighting in Galkayo between Puntland and Galmudug
Al-Shabab leader describes Turkey Somalia’s ‘enemy’
The leader of Somalia’s Shabaab jihadist group Ahmed Diriye described Turkey as “the enemy of the nation” and accused foreign peacekeeping forces of plundering the country, in an audio message published Tuesday. In his first [...]
Qofkii ugu horeeyay oo gudaha Soomaaliya ugu geeriyooday xanuunka caronavirus
Muqdisho-(Puntland Mirror) Qofkii ugu horeeyay ayaa gudaha Soomaaliya ugu geeriyooday xanuunka caronavirus, sida caawa fiidkii war-saxaafadeed ku sheegtay Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya. Qofka xanuunka u dhintay ayaa ah muwaadin Soomaali oo 58-jir ah, sida [...]
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo soo bandhigtay naqshada lacagta cusub ee la sameyn doono
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan soo bandhigtay naqshada lacagta cusub ee la sameyn doono. Wasiirka Maaliyada Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir saxaafadeed ku qabtay Sabtidii Muqdisho ayaa soo badhigay tusaale kamid ah qaabka [...]